Tibbana – Page 3 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
October 4, 2019 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
September 27, 2019 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
“ዮም መስቀል ተሰብሐ፤ ዓለም ተጸውአ፤ ወሰብእ ግዕዘ፡፡ Har’a Fannoon Gooftaa Ulfaate/kabajame; adduynaanis fayyinaaf ni waamame; dhalli namaas bilisa bahe” Yaareed Qulqullichaa
Jechi “Fannoo/መስቀል” jedhu Alaqaa Kidaana Waldi Kifleen galmee chechotaa isaanii keessatti fannoo, waan itti fannifaman, gidiraa du’aaf nama geessu jechuu dha jechuun hiikaniiru. (Fuula 883)
Fannoo Gooftaa bifa Afuurawaa fi iccitaawaatiin kan addeessan immii Qeerloosi Itiyoophiyaa jedhamuun kan beekamu Abbaa Giyoorgis kan Gaasiccaa ti. Isaanis haala kanaan ibsaniiru.
Muka jireenyaa ti.
Muka qorichaa ti.
Muka Raajii ti.
Muka aara galfii dha.
Murtuu seexana dhabamsiisu dha.
Kuttuu (seefii) mataa hoomaa seexanaa muru dha.
Chaappaa Qulqullinaa fi Qulqullummaa ti.
Waara Qabsuuraa irra jiraniif gonfoo injifannoo; warra gara cidha Hoolichaatti waamamaniif immoo uffannaa cidhaa ti… (Galata Fannoo/ውዳሴ መስቀል)
Qulqulleettiin Manni Kiristaanaa Ortodoksi hojiin isheen Fannoo malee hojjettu tokkollee hin jiru. Qulqulluu paatriyaarkii ishee irraa eegalee hanga amantootaatti hundumtuu waaqeeffannaa Waaqayyoof yeroo tattaaffatanitti adda durummaan Fannoo ni fayyadamu. Sirna Kadhannaas yeroo jalqaban lubichi Fannoon amantootni immoo quba isaanii bifa Fannoon sirreessanii mallatteessuun maqaa Sadummaa (Sillaasee) ni waamu. Manni Kiristaana keenya sirna raawwannaa Iccitiiwwan Mana Kiristaanaa yeroo raawwattu Fannoon Meeshaa Afuurawaa isa ijoo dha. Hayyoonni Mana Kiristaanaa tajaajila hunda galeessa isaa (Kan Fannoo) akka itti aanutti ibsaniiru.
“Dalaga keenya hundumaa keessatti, yeroo baanu fi gallu, uffannaa keenya uffachuu keenyaan duratti, dhiqachuu keenyaan durattis, gara dhangaa dhihaachuu keenyaan duratti, ibsaa yeroo qabsiisnu, Kitaaba Qulqulluu dubbisuuf yeroo jalqabnu fi xummurru akkasumas hojii keenya kan idilee jalqabuu keenyaan duratti fuula keenya mallattoo Fannootiin ni mallatteesina.”
Akkuma ifatti mul’atu, Manni Kiristaana keenya Fannoo Fayyina addunyaa ittiin raawwatame bantoo gamoo ishee irratti baattee jiraatti. Luboonni fi amantoonni immoo gara mooraa Mana Kiristaanaa yeroo seenan ija fooniin Fannoo; ija Afuuraatiin immoo Kiristoos Fannicha irratti fannifame ilaalaa Gooftaa isaaniif sagada Waaqeeffannaa; Fannoo Gooftaa isaaniif sagada kabajaa ni sagadu. “Iddoo/bakka miilli Isaa dhaabbateetti ni sagadna” (Faar. 131:7) akkuma jedhame Fannoo Isa qaamni Kiristoos irratti fannifame, harki fi miilli Isaa itti dhahame fi dhangalaa’uu Dhiiga Gooftaa keenyaan qulqullaa’eef ni sagadna.
Adeemsa itti fayyadama Seenaa isaas akka itti aanutti dha.
Jaarraa lammaffaa keessatti Sooriyaan Fannoo kallattii bahaatiin dadaarratti fannisuun ittiin fayyadamuu jalqabdee jirti.
Jaarraa afrafaa keessatti immoo iddoowwan gamoon Mana Kiristaanaa itti ijaarame hundatti alaa fi keessa isaanitti Fannoo fannisuun, kaa’uun fi bocuun bal’inaan faayidaarra ooluu jalqabe.
Kanaafis mootichi Qosxanxiinoos Maksimiyaanoos waliin wal waraaneetti “በዝ ትእምርተ መስቀል ትመውዕ ፀረከ፡፡ Mallattoo Fannoo kanaan diina keen ni injifatta” jecha jedhu Fannoo waliin tiifuu waaqaa/samii keessa itti mul’ateera. Kanuma bu’uureeffachuun Qosxanxiinoos mallattoo arge sana koora fardaa fi gaangee fi cancala isaaniirratti, gilaasii fi meshaalee isaaniirratti, meeshaalee waraanaa isaaniirratti, uffannaa waraanaa isaaniirratti fi alaabaa isaaniirratti mallattoo Fannoo Gooftaa bocuu isaatiin diina isaa injifachuu danda’eera. Tibba kanarraa eegalee Manneen Kiristaanaa keessatti bal’inaan faayidaarra ooluu jalqabeera. Kanarraa darbee biyyoonni akka Fiin Laandi, Joorjiyaa, Ayis Landi, Noorweey, Siwiizar Laand, Swiidiin, Giriiki fi k.k.f. alaabaa isaaniirratti mallattoo Fannoo kaasuu/kaa’uu Qosxanxiinoos irraa dhaalaniiru.
Qulqulluu Phaawloos Duuka Bu’ichi “Innis (Kiristoos) Dhaqna Isaa kan taate Mana Kiristaanaaf mataa dha.” Qol. 1:18 jechuun akkuma barsiisetti; Manni Kiristaanaas isa kana hojiitti hiikuun Gamoo Mana Kiristaanaa irratti Fannoo baachuun/kaayachuun Kiristoos mataa ishee ta’uu isaa ni mirkaneessiti. Ijoolleen ishees morma isaaniirratti hidhuun dhaqna Kiristoos (Mana Kiriataanaa) ta’uu isaanii ni agarsiisu. Fannoo kana yeroo ilaalanitti; isarratti kan fannifame, raawwataa fi mataa Fayyina isaanii kan ta’e Madihaanee’alam yaadachaa ija sammuutiin gara Qaraaniyoo ni imalu.
Seenaa kabaja ayyaana Masqalaa
Fannoon kan kabajame, addunyaan Fayyinaaf kan wamame fi dhalli namaa bilisa kan bahe Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosini yeroo ta’u, keessattuu waltajjii Qaraaniyootti gaafa fannifame kan raawwatamee dha. “ወይቤ ተፈጸመ ኵሉ፡፡ Hundumtuu ni raawwatawe.” akkuma jedhe. Du’a Fannoorratti Inni raawateen Raajii Raajootaan dubbatame fi fakkeenyi fakkeeffame hundumtuu waawwii isaa argateeraati.
Karaa biraatiin immoo kan raawwatame hundumtuu Fayyina dhala namaatiif ture waan ta’eef; Fayyinni dhala namaa raawwi isaa argate, labsame, mirkanaa’e. Fannoo Dhiiga Gooftaatiin Qulqullaa’e kana maaliif kabajna kan jedhuuf immoo haala itti aanuun ilaalla.
Qoricha isaanii kan ta’e Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos gananii kan fannisan Ayihuudonni Fannoon Dhiiga Gootaatiin Qulqullaa’e Jireenya fi Qoricha ta’uu isaa yeroo arganitti hinaaffaa badaadhaan ni qabaman. “Isa (Kiristoos) dhabamsiisnaan Fannoon Isaa immoo ajaa’iba hojjechuu eegalee!” jechaa hammeenyaan ka’anii boolla kuusaa balfaa ta’e keessa ni gatan. Hanga B.A. 70tti balfi isaan gatan Fannoo sanarratti akka tulluu ta’e. B.A. bara 70tti bara Iyyaruusaaleem bade sanatti garuu, Ayihuudonni hafan gara bakka biraa godaannaan bakkuma awwaalameetti irraanfatamee waggoota dhibba sadii oliif bakki itti awwaalame wallaalamee hafe.
Fannoon human Gooftaa akka ta’e kan hubatte (1ffaa Qor. 1:18) Illeeniin B.A. 326tti Fannoo Gooftaa barbaacha gara Iyyaruusaaleem dhaqxe. Achittis barsiistota Ayhuudii keessaa kan ta’e Kiraakoos kan jedhamu argatte. Bu’aa bayii guddaan booda iddoo Fannoon Gooftaa itti awwaalame itti agarsiiseera. Aantootni isaa Ayihuudootni boolla keessa awwaalanii balfa itti gataa akka jiran itti hime. Mootittiin Illeeniinis damaraa qopheessitee (qabsiistee) ixaana baay’ee irra goote. Aarri isaas teessoo Waaqayyoo fuulduratti gahee deebi’ee eeyyama Waaqayyoon gidduu tulluu Fannaan Gooftaa itti awwaalametti qubateera (sagadeera).
Ajaa’iba kanaa iddoo Fannoon Gooftaa itti argamu hubattee Fulbaana 17tti raayyaa fi uummaticha walitti waamtee tulluu sana qochisiisuu jalqabde. Balfa Fannoo Gooftaarraa tuulamee ture sana of-eeggannoon irraa kaasaa yeroo dheeraaf erga qotan booda dhumarratti fannoowwan saditu argaman. Isaan kana keessaa tokkichi Fannoo Gootaa yerooi ta’u kanneen hafan immoo fannoowwaa saamtootni lamaan irra fannifaman ture. Fannoon kunis ifaajee fi carraaqqii guddaan booda Bitooteessa 10tti kan argame yeroo ta’u, jaamtota/qaroo maleeyyii fayyiseera. Waarra miilaan tarkaanfachuu hin dandeenyes akka danda’an taasiseera. Waarra du’anis kaaseera. Fannoon Gooftaa keenyaa ajaa’ibawwan kana keessaattu kan du’e kaasuu isaatiin beekamuu danda’eera.
Eebifamtuun Illeeniin ajaa’ibaawwan Fannoo Gooftaarraa mul’atan sana irraa kan ka’e gammaduu isheetiin Fannicha hammattee Waaqayyoo ni galateeffatte. Uummanni ishee waliin jiran sun illee gammachuu guddaatu itti dhagahame. Harkaanis qaqqabaa Kiryaalaayisoon jechaa ni faarfatani. Galgaloofnaan Qulqulleettiin Illeeniin phaaphaasicha Abbaa Maqaariyoos waliin, raayyota ishee waliin fi uummaticha waliin xomboora qabatanii hiriira galanii faarfachaa Fannoo Gooftaa kabajuun bakka filatamaa ilaalanii kaayaniiru.
Qulqulleettiin Manni Kiristaanaas jalqaba irraa kaasee Fannicha kan baatte fi kan kabajju taatus, tibba kanarraa eegaltee ayyaana Fannoo Gooftaa kabajuu jalqabdeetti. Fannoof sagaduun, Fannoo dhuungachuu, Fannoodhaan amantoota eebbisuun, Fannoo qabachuu, uffannaa fi dhagna irratti Fakkii Fannoo bocuun babal’achaa dhufe. Warroota hin amanne biratti akka gowwummaatti kan lakkaa’amu (1ffaa Qor. 1:18) Fannoon Gooftaa Humna Waaqayyoo ta’uun isaa daran kan beekame fi kan lallabame tibba kana irraa eegalee ti.
Ayyaanni Fannoo Gooftaa Fulbaana 17tti kabajamuu isaatiif sababa kan ta’e kanaan olitti akkuma ibsineen Qulqulleettin Illeeniin dhangaa qopheessitee Fannoo Gooftaa argachuuf guyyaa tulluu sana qotuu itti jalqabde yeroo ta’u, sababni isaa inni ijoon garuu B.A. 327tti jechuunis waggaa tokkoon booda Mootittiin Illeeniin Fannoo Gooftaaf Mana Qulqullummaa ijaartee Fannichas Mana Qulqulluummaa isaa Golgootaatti ijaarte sana keessa galchitee guyyaa eebbifamuu Mana Qulqullummaa isaa sababeeffachuun raawwatama. Dabalataaniis Bitooteessa 10tti yaadannoo isaa kabajuu hin dhiifne.
Qulqulleettiin Manni Kiristaanaa Ortodoksi ayyaana Fannoo Gooftaa (Masqalaa) waggaa waggaan bifa ho’aa ta’een kabajji. Guyyaa sanattis jechuunis jala bultii ayyaana Fannoo Gooftaatti godaansa Fannoo Gooftaa barbaacha Illeenii yaadachuuf damaraa gubaa Waaqayyoon galateeffachaa oolti. Dhuma sirna kadhannaa isaa irrattis Abboonni kallattiiwwan afranuu Fannoon ebbiisanii damaricha ni qabsiisu. Amantootnis xomboora isaanii qabsiisaa seenaa fi Ifa Fannoo Gooftaan argame ni labsa. Qulqulleettiin Manni Kiristaanaa xiyyeeffannaa isheen Fannoo Gooftaaf kennitu ibsuuf Fulbaana 17-24tti guyyoota jiran TIBBA FANNOO GOOFTAA jettee moggaasteetti. Guyyoota kanattis Dubbiin Fannoo Gooftaa ni lallabama. Fannoo Gooftaafis Galata galchiti.
Fannoo Gooftaa fi Dubbii Fayyinaa
Dubbii Fayyinaa keessatti Fannoon dhagaa bu’uuraa dha. Raajiin raagame/dubbatame, torbeeffannaan lakkaa’ame fi fakkeenyi fakkeeffame xummura isaa kan argate Fannoo Gooftaa irratti dha (Yooh. 19:30). Namni Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jaaladha jedhu hundi Haadha yaboo (adaraa) ishee dhugaa kan argate Fannoo irraayi (Yooh. 19:25-27). Duuti waggoota 5500’f dhala namaa dararaa ture kan dhabamsiifame Du’a Gooftaa keenya Kiristoos Fannoo irratti taasifameeni. Xalayaa idaa inni seexanaan katabamee awwaalamee tures kan barbadaa’e Fannoo Isaatini. “Nurra bulee nubalaaleeffataa kan ture xalayaa du’aa/idaa abboommiin nurratti barreeffamee ture bakkee ni dhabamsiise” jechuun akkuma ibsetti jechuu dha(Qol. 2:14-16).
Waa’ee dubbii Fayyinaa yeroo kaasnu, waa’ee Fannoo kaasuun dirqama ta’a. Dhimmi (iccitiin) Fayyina keenyaa Fannoo malee hin raawwatamneeti. Hayyoonni isa kana Faarfannaa isaaniitiin yeroo kaasan, “ለአዳም ዘአግብኦ ውስተ ገነት፣ ወለፈያታዊ ኀረዮ በቅጽበት፣ ዝንቱ ውእቱ መስቀል፡፡ Addaamiin gara Gannatatti kan galche fi saamticha isa maddii mirgaa Gooftaa keenyaan fannifame battalaan kan waame Fannoo kana dha.” jechuudhaan dubbii Fayyinaa isa Fannoo irratti raawwatame ibsaniiru (icciteessaniiru). Dura aanaa Duuka Bu’ootaa kan ta’e Pheexiroos Qulqullichi Fayyina dhala namaa Fannoo irratti raawwatame akkas jechuun ibseera “Cubbuu keessa nubaasuuf jecha dhugaa Isaatiinis nufayyisuuf jecha Inni cubbuu keenyaaf mukarratti Foon Isaatiin ni fannifame madaa gidiraa Isaatiinis madaa keessan irraa aggaammattaniittu” (1ffaa Pheex. 2:24). Kanaan walqabsiisee ammas Duuka Bu’aan Paawloos Qulqullichis “Kanaan booda cubbuuf akka hin bitamneef foon keenya kan cubbuu akka barbadaa’uuf/dhabamuuf dhagni keenya moofaan Isa waliin akka fannifame ni beekna; kan du’es cubbuu isaatirraa fayyeeraati” jechuudhaan dhalli namaa isa bal’ina cubbuu jala oolee kan ture Fannoon bilisa bahuu isaa nuuf ibsa (Room. 6:6).
Fannoo; Wabii Nageenyaa
Akka barsiifannaa Qulqulleettii Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidootti Kiristoos Fannoo Isaatiin wantoota wal-faalleessan torban walitti araarseera. Isaaniis:
Waaqayyoo fi dhala namaa
Dhalli namaa fi Ergamoota Qulqulloota
Uummata Waaqayyoo fi alagaa
Lubbuu fi fooni dha.
Wantoota cimdii cimdii ta’an kana gidduu goolloon/gidaarri/dhaabni jibbiinsaa dhaabbatee waggoota 5500’f nageenyi gidduu isaaniitti dhabamee diinummaan jiraachaa turan. Isaan kana walitti araarsuun nageenya dhugaa Isaa isaaniif kan laate fi tokko kan taasise Gooftaa keenya Qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo ta’u, goolloon/gidaarri/dhaabni jibbiinsaa gidduu isaanitti dhaabamee ture kan diigame immoo Fannoo Qulqulluutini. “Inni nageenya keenya dhaati; lamaan sana tokko kan taasise seerota abboommii isaan labsiin dubbataman haqee goolloo/gidaara/dhaaba jibbiinsaa gudduu isaanitti ture Foon Isaatiin kan diige; kunis lamaan isaanii keessaa nama haaraa tokko ofii Isaatiin uumuuf; nageenyas argamsiisuuf; du’as Fannoo Isaatiin ajjeesee Fannichadhaanis lamaan isaanii akka dhagna tokkotti Waaqayyoo waliin walitti araarsuufi dha. Gara keessan dhufee isin warra fagaattanii turtaniif nageenya, warra dhihaatanii turaniifis nageenya bifa misiraachoon lallabe” jechuudhaan kan ibse nuuf mirkaneessuufi dha (Qol. 1:20). Akkuma kanaa olitti ibsametti, ‘uummattootni fi al-uummattootni (kan kittaanaman fi kan hin kittaanamne)’ moggasni jedhu hafee Kiristoosiin ‘Kiristaana’ jedhamnee waamamne. Maqaan kun nageenyi keenya kan ittiin ragga’e fi tokkummaan keenya ittiin labsame; warra lafaa fi samii galata (qiddaasee) tokkoon akka hirmaatan kan taasise ta’e.
Gooftaan keenya Qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Fannoon Isaa hundumaa kan ofitti ittiin qabe, tokko ittiin taasise ta’uu isaa keeyyata ittiin ibse keessatti “Akkuma An lafarraa ol ol jedhe, hundumaa ofittan harkisa” (Yooh. 12:32). Ulaagaaleen foonii osoo isa hin daangeessin namni kamiyyuu Fannoo Isaatii harkifamee Isatti dhihaateera. Lafarraa ol-siqee samiirraa immoo dag-siqee fannifamuun Isaas dhala namaa fi Ergamoota Waaqayyoo tokko taasisuu Isaatiif agarsiistuu dha. Rogootni Fannoo afran, kallattiiwwan Kiristoos afran kan eeru dubbiin Fannoo Isaa dhala namaa kallattiiwwan afranitti argaman hunduma isaanii waloomsuu Isaa kan ibsanii dha. kana bu’uureeffachuun hunduma dhiifnee Fannoo Isaa baannee akka Isa duuka buunu nu ajaje (Maar. 8:34).
Wiirttuu Finfinneetti Koree qopheessituu ayyaana Fannoo (Masqalaa)
Baankii Daldala Itiyoophiyaa
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2019-09-27 09:17:582019-09-27 09:17:59Baga Gammaddan!!
Sagaleen kun katabamee kan argamu Hojii Duuka Bu’ootaa isa harka barreessaa Wangeelaa kan ta’e Luuqaasiin bareeffame keessatti dha. Taateen yeroo sanatti ta’ee tures Duuka Bu’ootarra bu’uu Afuura Qulqulluuti (ርደተ መንፈስ ቅዱስ). Guyyaan sunis ‘Guyyaa dhalachuu Mana Kiristaanaa’s ni jedhama. Caqasni isaas Hoj.Duu.Bu. 2:1-Dhu.Boq. ti.
Caqasa kanaan wal qabatee shakkitoonni amantaa yaad-rimeewwan adda addaa ni kaasu.
‘Nuyi Afuura Qulqulluun guutamnee qooqaalee adda addaa dubbanna. Akkuma Kitaabni Qulqulluu “Hundumtuu Afuura Qulqulluun ni guutamani. Hammuma Afuurri Qulqulluu isaaniif laateen qooqaalee biroon dubbachuu jalqabani.’ ወተመልኡ ኵሎሙ መንፈሰ ኀይል ወአኀዙ ይንብቡ ዘዘዚኣሆሙ በነገረ ኵሉ በሐውርት በከመ ወሀቦሙ መንፈስ ይንብቡ።” H/D/B/ 2:1-21 jedhutti jechuudhaan caqasa Kitaaba Qulqulluu caqasuu yeroo barbaadan ni mul’atu.
Haa ta’u malee, waan Kitaabni Qulqulluu jedhu fi isaan (shakkitootni) kan jedhan walitti hin dhufu. Kitaabni Qulqulluu “Hundumtuu Afuura Qulqulluun ni guutamani. Hammuma Afuurri Qulqulluu isaaniif lateen qooqaalee biroon dubbachuu jalqabani” jedha malee, qooqa hin beekkamneen dubbatani hin jedu. Isa kana hubachuufis Hoj. D/B/ 2:6 irratti “Jarreen kun hundinuu bubbee kana yeroo dhaga’an; iddoo kun ta’etti walitti qabamani. Warri Afuura Qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon tokkoo isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan, waan jedhan wallaalan. Na’anii dinqisiifatanii “Warri dubbachaa jiran kun hundinuu namoota Galiilaa miti moo? jedhani. Dabalataanis, “Tokkoon tokkoon keenya akkamitti afaan itti dhalanneen yeroo dubbatan isaan dhageenya? ”jechuudhaan afaan /qooqni/ isaaniif kenname qooqa biyya lafaarratti dubbatamu ta’uusaa beekuu dandeenya.
Caqasni Hoj.D/B/ 2:6 irratti caqasame akka isaan hin deeggarre yeroo beekanitti gara Wangeela Maariqoos deemanii Maar. 16:16 kaasuudhaan “Gooftaa Iyyasuus Kiristoositti ija amanneef qooqa armaan dura hin dubbatamne nudubbachiisa.” Jedhu. Dhugaa dha Gooftaan keenya Fayyisaan keennya Iyyasuus Kiristoos qooqa addunyarratti dubbatamee hin beekne amantoota dhugaaf kennuu akka danda’u shakkii hin qabnu. Garuu, ifa Mana Kiristaana jedhamuun kan beekkamu Qulqulluu Phaawloos 1ffaa 14:11 irratti akkas nuun jedha. “Addunyaarratti akaakuu qooqaa lakkoofsa hin qabne (bay’ee) jiraachuu danda’u; uummanni qooqa hin qabne hin jiru. Egaa, hiika qooqa sanaa beekuu dhabnaan hawaasa qooqa sana dubbatu biratti keessummaan ta’a; hawaasni sunis anaaf keessummaa ta’a.” jedhee ka’ee lakkoofsa 13ffaarratti “Kanaafuu, namni qooqaan dubbatu qooqa sana hiikuu akka danda’uuf gara Waaqayyoo haa kadhatu.” Jechuudhaan erga ibse booda, lakkoofsa 28ffaa rrattii “Namni hiiku dhabamnaan garuu, waldaa keessa callisuudhaan Waaqayyoo waliin ittiin haahaasa’u.” jechuudhaan goolabeera. Ammas asirratti qabxiilee sadi gad-fageenyaan ilaaluun barbaachisaa dha.
Qooqni tokko hiikamu kan danda’u ta’uu qaba. Qooqni shakkitoonni amantaa ni dubbanna jedhan kun hiika kan hin qabne fi waldaa ykn gurmii amantootaa amantiin cimsuuf kan hin fayyadne dha.
Namoonni lama fi sanaa ol ifoominni qooqaa isaaniif yoo ifoome dabaree dabareen dubbachuu qabu. Shakkitoonni amntaa garuu yeroo dubbatan waluu hin dhaggeeffatan. Dabaree isaanii eeggatanii dubbachuu dhiisuun isaanii dogongora guddaa akka ta’e Kitaabni Qulqulluu ragaa nuuf baha.
Ifoomonni qooqaa yoo namaaf ifoome, hiika isaas Waaqni akka isaaniif kennu kadhannaa gochuu qabu. Kennaan hiikkaa kennamuu dhiisnaan garuu, waldaa keessa callisuu qabu. Shakkitoonni amntaa qooqa hin beekneen waldaa keessa dubbachuu dhiisuu dhabuun isaaniis dogongora biraa dha.
Kanaaf kana hubannee barsiifata dogongoraa shakkitoonni barsiisan irraa of-eeguu akka qabnu beekuun nurraa eegama.
Galanni Waaqayoof haa ta’u.
Araarsummaan Durbee Isa deesse fi eebbisni Fannoo Isaa ulfaataa nurra haa bulu.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2019-06-27 08:29:012019-07-02 15:21:05“Hundumtuu Humna Afuura Qulqulluun ni guutaman.” “ወተመልኡ ኵሎሙ መንፈሰ ኀይል” H/D/B/ 2:1-21
Dn. Mazgabuu Kafiyaalaw
Adeemsa jireenya dhala namaa keessatti dhalachuu, jiraachuu fi du’uun muudannoowwan deddeebi’anii mul’atani dha. Dhimma kana ilaaluun namoonni tokko tokko jireenyi dhala namaa hanga lafa kana irratti afuursuu fi deddeebi’u qofatti malee duunaan faayidaa dhabeessa ta’a jedhanii yaadu. Garuu, jireenyi dhala namaa jireenya addunyaa kanarraa darbee akka itti fufu Manni Kiristaanaa keenya ni barsiisti. Barumsa ishee kanas barumsa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irratti hundeeffatte dha. Kiristoos irraa kan baratan Duuka Bu’oonnis, Mana Kiristaanaaf dhaalchisaniiru. Duuka Bu’ichi Qulqulluu Phaawloos ergaa isaa gara saba Qorntoositti erge irratti “Amma garuu Kiristoos warra du’an hundaaf angafa ta’ee du’aa ka’eera; duuti karaa namaa akkuma ta’e, du’aa ka’uunis karaa namaa ta’eera. Hunduu sababa Addaamiin akkuma du’an hunduu ammoo Kiristoosiin du’aa ka’u” jechuudhaan dhalli namaa du’ee akka hin hafnee fi jireenya bara baraatiif akka ka’u nu barsiiseera. (1Qor. 15:20) Barreeffama kana keessatti waa’ee du’aa ka’uu dhala namaa, du’aa ka’uu Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin isa nuuf labsame waliin wal bira qabnee barumsa Manni Kiristaanaa keenya nu barsiistu ilaalla.
Uumamni dhala namaa du’ee tortoree akka hafuuf osoo hin taane jireenya bara baraa argachuun akka Waaqa isaa galateeffachaa jiraatuuf ture. Seenaa sirna uumamaa jalqabaa keessatti akkuma hubannu duuti hin turre. Namoonni akkuma Ergamootaa bara baraan akka jiraataniif uumamani malee akka du’aniif hin turre. Waaqayyo nama bifa Isaatii fi fakkaatti Isaatiin yemmuu uumu; Afuura jireenyaas yemmuu irra bulchu; lubbuun isaa qofa jiraattuu bara baraa akka taatuuf osoo hin taane lubbuun isaa foon isaa wajjin tokko taatee hanga akka inni bara baraaf akka jiraattuufi dha. Kanas Waaqayyo dhala namaa akka bifa Isaa fi akka fakkeenya Isaatti uumuu isaatiin akka isaan jiraattota bara baraa ta’aniif uumamuu isaanii hubanna. Kanaafuu, Addaamii fi Heewaaniin uumee bakka jireenyi bara baraa jiru gammachuudhaan akka jiraataniif Gannata keessa isaan galche. Gannata keessattis, dhukkubni fi du’ti hin jiru ture (Se.Um.1: 26-30; 2: 8-9)
Manni Kiristaanaa keenya dhalli namaa du’ee tortoree hafuuf akka hin uumamne barsiisti. Waaqayyo du’aaf akka nama hin uumnes irra deddeebiidhaan ni ibsiti. ogeesichi Solomoon “Waaqayyo du’a hin uumne; bara baraan akka jiraatuuf uumama uume; badiin namootaa Isa hin gammachiisu” jechuudhaan nu hubachiisa. Dhalli namaa akka hin dune qofa osoo hin taane; bakka duuti hin jirre akka jiraachaa tures“ Awwaallis daangaa kana keessa hin turre” jechuudhaan nu hubachiisa ( Xibab. 1:13-16).
Dhalli namaa du’aaf hin uumamne erga ta’ee, duuti akkamiin dhufe? Gaaffii jedhu ilaaluun du’aa ka’uu dhala namaa hubachuuf nu gargaara. Sababni du’a dhala namaa Waaqayyo irraa fagaachuun ajaja Isaa cabsuu dhala namaati. Kana ilaalchisee ogeessichi Solomoon “Warreen Waaqayyo hirraanfatan garuu, sagaleedhaan Isa waamani; hiriyyaa isaaniis Isa taassisani; kanumaanis badani” jedhee dhalli namaa fedhaan du’a akka ofitti fide dubbata (Xibab. 1:13).
Duuti kan eegale Addaamii fi Heewaan seera Uumaa isaanii cabsuun yeroo balleessaa hojjetani ture,( se. uum. 2:17) kanaafuu, gatiin cubbuu isaanii du’a ta’e ( se. uum. 3:16-19). Isaan seera Uumaa isaanii yemmuu diigan; kabaja uumama isaanii jalqabaa irraa haqamani. Kennaan isaaniis isaan irraa mulqame; qullaas ta’ani. Sana booda, biyya bareedduu fi Qulqulleettii taate keessaa ari’atamanii biyya rakkoonii fi duuti irra jiru keessa jiraachuu eegalani. Yeroo sanaa eegalee duuti Addaamii fi Heewaan irratti injifannoo argatee bittaa isaa jala galche. Eegumsa addaa Waaqayyoon eegamaa kan turte Giiftii keenya Dubroo Maariyaam irraa kan hafe dhalli namaa hundi Addaamii fi Heewaan irraa dhalatan hirmaattotaa fi dhaaltota balleessaa isaanii ta’ani.
Kana waan ta’eef, Duuka Buutichi Qulqulluu Phaawloos “Sababa nama tokkoo cubbuun gara addunyaatti dhufe; cubbuudhaanis duuti seene; akkuma kanaa hundi isaanii waan cubbuu hojjetaniif duuti dhala namaa hunda bira ga’e” jechuun dhufaatii du’aa hubachiiseera (Room.5:12).
Namni du’a ofitti fidus, abdiin du’aa ka’uu kennemeeraaf
Dhalli namaa harka isaatiin ajaja Waaqayyoo cabsuun du’a ofitti fidus; Waaqayyo garuu dhala namaa kufe kana akka kufetti du’a bara baraatiif isa hin dhiisne. Waaqayyo baduu dhala namaa hin jaalanne nama gara bakka kabaja isaa duraatti deebisuuuf yaadee cubbuu fi du’a balleessee du’aa ka’uu fi jireenya bara baraa dhala namaaf kan kennu ta’uu Isaa dursa sababa raajota Isaatiin fedha Isaa nuuf ibseera. Faarsaa Daawit irratti “ Afuura kee ni ergita ; ni uumamus; fuula lafaas ni haaroomsita” inni jedhu sagalee du’aa ka’uuti (Faar. 103: 30). Waaqayyo du’a balleessee nu haaromsee akka nu jiraachisu sagalee Faarsaa Daawit waliin kan walfakkaatu Mul’ata Yohaannis keessatti “……Kunoo hunda iyyuu haaraan taassisa” jedhee nutti hima (Mul. 21:5)
Raajichi Isaayiyyaasis “ warri du’an jiraattota ta’u; reeffawwanis ni ka’u; yaa warra lafa irra jiraattanii jiidhi kee jiidha ifaati waan ta’eef; laftis warra du’an baasti waan ta’eef ka’aa faarfadhaa!” jedhee barreesse (Isaa. 26:19). Kunis, waa’ee du’aa ka’uu dhala nama hundaa dhuma addunyaa irratti raawwatamu nu hubachiisa. Akkasuma, Raajichi Daani’eel “Bara sanas waa’ee ijoollee uummata keetiif inni dhaabatu hogganaa Agngafaa Mikaa’el ni ka’a; uummata irrattis erga uummata ta’ee (addunayaan uumamee) eegalees hanga bara sanaatti rakkoon ta’ee hin beekne bara rakkoo ta’a; bara sanas uummanni kee kitaaba Isaa irratti barreeffamee argame hundi tokkoon tokkoon isaanii ni fayyu. Warri biyyee lafaa keessatti rafan baay’een isaaniis ni ka’u; walakkaan isaanii gara jireenya bara baraa; walakkaan isaanii ammoo gara leeyyoo fi gidiraa bara baraatti. Ogeessonni akka calaqqee; warri namoota baay’ee gara daandii qulqullummaatti deebisan ammoo akka urjiitti bara baraan bareedanii mul’atu” ( Daan. 12:1-3) jechuun dubbata.
“Walakkaan isaanii gara jireenya bara baraatti” kan jedhame du’aa ka’uu kabajaa kan Qulqullootaa kan agarsiisu yemmuu ta’u; “Walakkaan isaanii gara gidiraa bara baraatti” kan jedhu ammoo du’aa ka’uu cubbamtootaa kan agarsiisu dha. Warreen ogeessota jedhaman Qulqulloota dha. Isaan du’aa ka’uu dhumaa irratti akka biiftuutti calaqqisan; akka urjiilees bareedanii mul’atu isaanii kennaa bara dhumaa irratti Waaqayyo biraa isaanii kennamu dha. Kabajnii fi kennaan kun hundi kan argamu; namnis kan gara kabaja isaa jalqabaatti deebi’u cubbuun isaa isaaf yommuu haqamu; abaarsi isaas yommuu irraa ka’u dha. Kanaafis, Gooftaan nama ta’ee murtii du’aa sababa cubbuutiin dhufe namummaa Isaatiin fudhatee beenyaa kaffalee du’as du’a Isaatiin haqeera. Sababa du’a Isaatiin namootaaf du’aa ka’uu fi jireenya bara baraa kenneera. Kanaaf, Gooftaan Fannoo irratti aarsaa ta’ee guyyaa Jimaataa fannifame sana Lubbuu Isaa Qulqulleettii taate Foon Isaa Qulqulluu ta’e irraa yeroo adda baasetti awwaalchonni banamanii Qulqulloota rafanii (du’anii) turan keessaa baay’een isaanii ka’an ( Maat.27:52).
Lubbuuwwanis si’ool keessaa baasee Gannatatti kan galche gaafa guyyaa sanaa ture. Egaa, Kiristoos aarsaa ta’uun du’a Isaa kabajamaa ta’een cubbuu fi du’a dhabamsiisee nama gara kabaja isaa duraatti deebiseera. Booda irra ammoo foonii fi lubbuu Isaa walitti deebisee ( tokko taassisee) du’aa ka’uu kabajaa kennee Mootummaa Waaqayyoo galcha. Waaqayyo dhala namaa waan jaalatuuf jireenya bara baraa kenneef. Kanaafis foon hin tortorre gonfatee akka du’aa ka’uuf abdii kenne. Abdii Isaa kanas haala itti raawwatu Qulqullichi Phaawuloos yommuu ibsu:- “kan hin tortorre ta’anii ka’u; nutis ni jijjiiramna, inni tortoru kun isa hin tortorre uffachuuf; inni du’u isa hin duune uffachuun irra jiraataatii; garuu, inni tortoru kun isa hin tortorre yemmuu uffatu; inni du’u kunis isa hin dune yemmuu uffatu; yeroo sana duuti injifatamuu isaatiin liqimfame jedhamee sagaleen barreeffame ni raawwata. Yaa du’a waraanni kee eessa jira? Yaa si’ool injifannoon kee meerre? Waraanni du’aa cubbuu dha; humni cubbuus seera dha; Garuu, karaa Gooftaa keenya Iyyasuus kiristoos Waaqayyo injifannoo nuuf kennuuf galatni haa ta’u”( 1Qor. 15:51-57) jedha.
Dhalli namaa abdii kutatee akka hin hafneef Waaqayyo jalqaba abdii du’aa ka’uu raajota isaarra bulee itti hime. Kanaafuu, jireeni dhalli namaa hanga lafarra deddeebi’u qofatti osoo hin taane jireenya bara baraatiif uumamuu isaa nu hubachiise. Isa hubachiise kanas Waaqayyo ofuma Isaa raawwachuudhaan abdii jechaan kenne sana gochaan mirkaneesse. Mirkaneessi Waaqayyo raawwate kunis du’uudhaan du’aa ka’ee agarsiisuu Isaati.
Manni Kiristaanaa keenya du’aa ka’uu dhala namaa yeroo barsiistutti ragaa qabatteeti malee akkanumaan miti. Ragaan ishee kunis jalqaba Mana Kiristaanaa kan hundeesse Gooftaa fi Hudeessaa ishee du’ee du’a injifachuun du’aa ka’e; Kiristoosiin bu’uura godhachuudhaani dha. Ka’umsii fi ga’umsi barumsa Mana Kiristaanaa dhimma du’aa fi du’aa ka’uu irratti kan xiiyyeffate yoo jedhame kan dhugaa irraa fagaate hin ta’u. kaayyoonii fi galmi inni dhumaa kan itti Kiristoos nama ta’ee du’a balleessee du’aa ka’uu fi jireenya bara baraa nu gonfachiisuuf akka ta’e Wangeelaa irratti barreeffameera. Amantaan kiristaanaa ka’umsa isaa irraa, Wangeelli jalqaba irratti yemmuu lallabamu waa’ee du’aa ka’uu Kiristoos akka ta’e gaafa guyyaa shantammaffaa ragummaan Qulqulluu Pheexroos irraa kenname nuuf mirkaneessa. ( Hoj. Duuk.2:14-36)
Ayihudoonni foon Gooftaa awwaalcha keessaa akka hin kaane taassisuuf cuqqaalanii turan ( Maat.27:62-66). Garuu, Gooftaan awwaalcha naaf bann! Kanan ittiin kafaname naaf hiikaa! Osoo hin jedhiin awwaalcha cufamee jiru keessaa aangoo Waaqummaa Isaatiin du’a irraa adda bahee gaafa guyyaa sadaffaa ka’e. awwaalcha inni itti awwaalames duwwaa hafe, Kiristoos, inni du’aa ka’es, harka Isaa dhisamanii fi cinaacha Isaa eeboodhaan waraaname akka agarsiisetti Duukaa Buutotaa fi hordoftoota Isaa hundatti mul’ate.
Ayihudoonni Kiristoos akka du’aa hin kaaneef awwaala Inni itti awwaalame saamsanii waardiyyoota isaaniif amanamoo ta’anii fi jabina qaban filatanii eegsisaa turani. Garuu hanguma cimsanii awwaala Isaa eegsisan du’aa ka’uu Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos cimsanii raggaassisani. Kanas qulqullichi Eefireem inni biyya Sooriyaa faaruu Isaa waa’ee dhalachuu Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos faarfate irratti :- “ Yaa Gooftaa du’aa ka’uun kee akka mirkanaa’uuf Yihudoonni awwaala kee saamsanii waardiyyootaan eegsisani. Yaa Gooftaa osoo si awwaalanii dhiisanii deemaniiru ta’ee [duukabuutonni kee] dhufanii foon kee hatanii fudhatanii deeman jedhanii sobuuf isaaniif mijata ture; garuu awwaala kee saamsanii eeguu isaaniitiin du’aa ka’uu kee mirkaneessani. Sababiin isaa duukabuutota keetu foon kee hate jechuuf isaanii hin mijanneetii” jechuun dubbateera (st. Ephrem Syrian Hymn on Nativity 6:8)
Ayihudoonni awwaalcha Gooftaan keenya Iyyasiuus Kiristoos itti awwaalame saamsanii eeganis du’aa ka’uu Isaa hambisuu hin dandeenye. Du’aa ka’uu Isaa warreen hubatan Duukaa Bu’oo Isaa ragoota du’aa ka’uu Isaa ta’uun amantaa Kiristaanummaa babal’isani. Warra diinota du’aa ka’uu ta’an hunda qaanessani. Eeboos, ibiddas, seefiis, rakkinas hunda osoo hin sodaatiinii fi hin leeyya’iin hanga du’aatti wangeela du’aa ka’uu Isaa barsiisaniiru. Sababni isaan du’a osoo hin sodaatiin hafaniifis isaan hirmaattota du’aa ka’uu Kiristoos akka ta’an waan amananiifidha ture. Egaa hangafni du’aa ka’uu, jechuunis, Kiristoos Isa du’aa ka’uudhaaf isa jalqabaa ta’e akka ilaalle; sagalee Isaa irraas akka baranne du’aa ka’uun akka jiru haa amannu. abdiis haa godhannu. Kiristoos ka’umsaa fi jireenyadhaatii. “Kan Anatti amanu yoo du’e illee jiraataa ta’a; kan jiraataa ta’es hunduu bara baraan hin du’u” ( Yoh. 11:25-26)
Du’aa ka’uu dhala namaa ilaalchisee Qulqullichi Phaawloos yeroo barsiisaa turetti namoota Qorontoos keessaa muraasni “Namni du’e akkamiin du’aa ka’a?” gaaffii jedhu kaasaa turani. Kanaaf Qulqullichi Phaawuloos“Kiristoos du’aa akka ka’e kan lallabu yoo ta’e garuu isin keessaa namoonni tokko tokko akkamiin du’aa ka’uun hin jiru jedhu?” jechuun gaaffiiwwan namoonni Qorontoos kaasaniif yemmuu deebisu: “ Du’aa ka’uun hin jiru yoo ta’e Kiristoos hin kaane jechuudhakaa; Kiristoos hin kaane yoo ta’e egaa lallabni keenya faayidaa dhabeessa; amantaan keessanis ammoo faayidaa hin qabu; hanga ammaatti cubbuu keessaniin jirtu. Egaa, warri Kiristoosiin rafan (du’an) ammoo badaniiru jechuudhakaa! jireenya kana qofaan (jireenya lafa irraa qofaan) kan Kiristoosiin abdannu yoo ta’e, namoota hunda caala nuti gowwoota dha” erga jedhee booda, itti fufuun waa’ee du’aa ka’uu Kiristoos akkas jechuun ragaa baha.
“Amma garuu Kiristoos warra du’an hundaaf Angafa ta’ee du’aa ka’eera; duuti karaa namaa akkuma ta’e du’aa ka’uunis karaa namaa (Kiristoos) ta’eera. Hunduu sababa Addaamiin akkuma du’an, hunduu ammoo Kiristoosiin jiraattota ta’u” jedhee dubbate. kanuma wajjin walqabsiisuunis, Duukaa Bu’chi ragummaa isaa kakuudhaan kenna: “ akkana ta’uu baannaan ammoo nuti hoo maalif jireenya nama sodaachisu keessa jiraanna ree? Abdii Iyyasuus irraa qabnuun akkan kakadhe Yaa obbolootaa! Guyyaa guyyaadhaan nan du’a; akka namaatti Eefeesoon keessaitti bineensa waliin wal’aansoo wal qabe? Warri du’an kan hin kaane yoo ta’e kana raawwachuun koo maal na fayyada?” (1Qor. 15:12-32) jedhees gaafata.
Ragummaan Duukaa Bu’aa Phaawuloos kun dhugaa ta’uun kan bara baraan jiraatu ta’a. warri ergaasaa dubbisan hundi dhugummaa fi sirrii ta’uu ragummaa isaas hubatu. Sababni isaas jalqaba irratti inni balaaleeffataa ta’ee Ayihudoota waliin waliigaluun kiristaanota osoo ari’ataa jiruu Kiristoos inni du’ee ka’e waan isatti mul’ateef du’aa ka’uu ilaalchisee amantaa isaa afaaniin qofa osoo hin taane hojii isaatiinis, jireenya isaatiinis, du’a isaatiinis, waan mirkaneesseefi dha. ( Hoj. Duuk. 9:1-30; 17:1-34; 22:1-30;23:1-11)
Egaa, isa Qulqulluu Phaawloos argee dhandhamee barsiise kana, nuti ammoo barachuu fi amanuudhaan jireenya bara baraa akka argannuuf cimnee dhaabachuutu nurra jiraata. Kiristoos warreen du’aniif angafa ta’uun akkuma du’aa ka’e bara dhumaatti dhalli namaa hunduu jireenya bara baraa dhaaluuf akka du’aa ka’u amanuu fi abdachuun of qopheessinuu qabna.
Akkuma armaan olitti ilaalle, jalqaba irraa uumamni dhala namaa du’ee tortoree akka hafuuf miti. Jireenya bara baraatiif uumamee fedha isaatiin du’a ofitti fidus Waaqayyo garuu akka du’etti akka hin hafneef abdii du’aa ka’uu kenneef. Cubbuu dhalli namaa ittiin du’e ajjeesuudhaafis Waaqayyo nama ta’ee du’ee du’a ajjeese. Waaqayyoo Ofii du’ee du’aa ka’uudhaanis abdii du’aa ka’uu kenne sana akka raawwatu mirkaneessee jira. Garuu, namoonni ammallee wallaalummaadhaan dhalli namaa du’aa ka’uun jireenya bara baraa jiraachuu isaa irratti yeroo gaaffii kaasan ni dhagahamu. Gaaffiin akkanaa kan amma eegale osoo hin taane, duruma “Namni du’ee tortoree biyyee erga ta’ee booda akkamiin ka’a?” jechuun gaafachaa turaniiru. Namoonni akkanaa kun namni jalqaba yemmuu uumamu biyyee lafaa irraa akka ta’e irraanfachuu isaanii nu hubachiisa. Waaqayyo dhala namaa jalqabumaa biyyee irraa uume (Se. Uum.2: 7) ammas Uumaan isaa biyyee keessaa isa kaasuu danda’a. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Kanaafuu, du’aa ka’uutti ni amanna; ni abdannas yemmuu jennu Waaqayyoo fi sagalee abdii Isaatti amanuudhaani ( Yoh. 5:24-29)
Kanaaf, amantaadhaan dhaabannee, du’aa ka’uu dhala namaa abdannee cimnee eeguutu nurra jiraata. Waaqayyo dhufaatii Isaa isa lammaffaa irratti “Isin yaa eebbifamtoota Abbaa Koo gara bakka addunyaan osoo hin uumamiin dura isiniif qophaa’eetti koottaa seenaa!” sagalee jedhu akka dhageenyuuf hojii gaarii haa hojjennu. Waaqayyo dhufaatii Isaatti gara Mootummaa Isaa akka nu galchu eeyyama Isaa nuuf haa ta’u; ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2019-05-12 08:32:242019-05-12 08:32:24“Amma garuu Kiristoos warra du’an hundaaf angafa ta’ee du’aa ka’eera” (1Qor. 15: 12-32)
January 16, 2019 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo